27 ပတ်သားကလေး - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးငယ်ပထမနှစ် » 27 ပတ်သားကလေး
ရေးသားသူ Dr. Su Sandy ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
၂၇ ပတ်တွင် သင့်ကလေးသည် –
• တစ်ယောက်ယောက် သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို ကိုင်ပြီး မတ်တပ်ရပ်နိုင်သည်။
• သူမအရုပ်ကုို သင်ယူသွားဖို့လုပ်လျှင် မကြိုက်ကြောင်းပြသည်။
• သူလက်လှမ်းမမီ သောနေရာမှ ကစားစရာဆီသို့ ရောက်ရန်ကြိုးစားသည်။
• လက်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ပစ္စည်းများကို ပြောင်းကိုင်သည်။
• ပြုတ်ကျသော ပစ္စည်းကုို လိုက်ရှာနိုင်သည်။
• ပစ္စည်းသေးများကို ကောက်ယူနိုင်ပြီး လက်ထဲတွင် ဆုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
• ဘ-ဘ-ဘ မ-မ-မ ကဲ့သို့သော အတွဲသံများကို ပြောနိုင်လာသည်။
• လက်နှင့် အစာစားရန် ကြိုးစားလိုသည်။
• လက်ထဲတွင် မုန့်များကို ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း၊ လက်ထဲမှ မုန့်ကို စားခြင်းများ လုပ်နိုင်သည်။
ကလေးကို မည်သို့ ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ပါသလဲ။
သင့်ကလေးသည် သင့်ဇွန်းကို ဆွဲလုခြင်း၊ သင့်ပန်းကန်ထဲမှ အစားကို လက်နှင့်နှုိုက်ခြင်းဖြင့် သူလက်ဖြင့် အစာစားနိုင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သင့်ကုို ပြနိုင်သည်။ မကွဲနိုင်သော ပန်းကန် သို့မဟုတ် ဗန်းထဲတွင် အစားအစာများကို သေးအောင် ပြုလုပ်ပြီး ကလေးယူစားနိုင်အောင် ထည့်ပေးပါ။ အစာမနင်စေရန် သင့်ကလေးကို တည့်တည့်ထိုင်သည့်ပုံစံတွင် စားခိုင်းပါ။ ကလေးသည် သွားမရှိသော်လည်း အစားစားချင်စိတ်ရှိနိုင်သည်။ အစားများကို သွားဖုံးဖြင့် ၀ါးခြင်း သို့မဟုတ် ပါးစပ်ထဲတွင် ပျော့ပြီး ပျော်သွားသည်အထိ ငုံထားနိုင်သည်။ ကလေးကြီးပြင်းလာလျှင် ကလေးစားမည့် အစားအစာ ၏ အရွယ်အစားကို ကြီးနိုင်သည်။
သင့်ကလေးကို ဘာသာစကားတုိုးတက်စေရန်နှင့် စာဖတ်ခြင်းကို နှစ်သက်စေရန် စာအုပ်များကို မြင်နိုင်ရန် ခေါ်သွားသင့်သည်။ သင်စာဖတ်နေချိန်တွင် သင့်ကလေးသည် ထိုင်စောင့်ရန်စိတ်မရှည်နိုင်ဖြစ်တတ်သော်လည်း စိတ်မပျက်ပါနှင့်။ သင့်ကလေး အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး၊စာဖတ်ခြင်းသည် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာရန် သူ့အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဝန်နှင့် ဘာတွေ ဆွေးနွေးသင့်ပါသလဲ။
ကလေး၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဆရာဝန်မှ လိုအပ်သော စမ်းသပ်မှု၊ စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သူနာပြုမှ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။
• သင့်ကလေး ကျန်းမာရေးကောင်းနေလျှင် ကာကွယ်ဆေးကို တတိယအကြိမ် ထိုးရပါမည်။ ဆေးထိုးပြီးလျှင် ဖြစ်နိုင်သည်များကို ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးရန်မမေ့ပါနှင့်။
• တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး မည်သို့သော တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်နိုင်သည်ကို ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး မည်သို့သော တုံ့ပြန်မှုများပေါ်နိုင်သည်။ ဆရာဝန်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် အကြောင်းကြားသင့်သည်။ ကလေးကို မည်သို့သော အစားအစာများကျွေးသင့်သည် ဆိုတာကို သင်သိထားရပါမည်။
အောက်ပါတို့သည် သင်သိထားသင့်သော အကြောင်းအရာတစ်ချို့ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းသည် ကြောက်စရာကောင်းသော်လည်း အဆိုးဆုံးအခြေအနေကို ကာကွယ်နိုင်ရန် သင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။ အရေးပေါ်အခန်းသို့ ရောက်နိုင်သည့်အခြေအနေများမှာ ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်ပွားခြင်း၊ အူပိတ်ခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးသည် စူးစမ်းတတ်ပြီး လှုပ်ရှားတက်ကြွနေလျှင် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ကောက်မြိုချမိခြင်း၊ ပြုတ်ကျခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊နှင့် စုတ်ပြဲခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ပြီး ဒဏ်ရာကို ချုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်ကလေးတွင် အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်းဖြစ်လျှင် အရေးပေါ်သို့ အကြောင်းကြားပါ။ အရေးပေါ်ကိစ္စမဖြစ်ခင် ကလေးဆေးရုံ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ဌာန ဘယ်နားတွင် ရှိသည်ကို သင်သိထားရပါမည်။ အရေးပေါ်မှ သင့်ကို ဖြည့်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်ကလေးနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ယူဆောင်သွားပါ။
သင်စိတ်ပူနေသေ်ာလည်း သင့်ကလေးရှေ့ မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နေပြပါ။ သင့်ကလေးကို စိတ်တည်ငြိမ်စေရန် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် လုပ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကလေးအတွက် အ၀တ်အစားများ၊ သေးခံဘောင်းဘီများ၊ စာအုပ်အချို့နှင့် သင့်ကလေးနှစ်သက်သော အရုပ်များ နှင့် အစားအသောက်များကို ယူဆောင်သွားပါ။ ဆေးကုနေစဉ်တွင် သင့်ကလေးကို အစားအစာကျွေးနုိုင်သလား မေးမြန်းပါ။
ကလေး အသက်တစ်နှစ်မပြည့်ခင်အထိ နွားနို့ကို မတိုက်သင့်ပါ။ ဖြစ်နုိုင်လျှင် ကလေးကို မိခင်နို့ကို တစ်နှစ်ခန့်အထိ ဆက်တိုက်ပေးပါ။ ထို့နောက်တွင် မိခင်နှင့် ကလေးဆန္ဒရှိလျှင် ဆက်တိုက်နိုင်ပါသေးသည်။ သင့်ကလေးကို နို့ မတိုက်နုိုင်လျှင် သံဓာတ်အားဖြည့်သော အာဟာရမှုန့်ကို ကျွေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ဆရာဝန်နှင့် မည်သည့် အာဟာရမှုန့် အမျိုးအစားကို ကျွေးရမည်ကို တိုင်ပင်ပါ။
သင့်ကလေးကို နွားနို့ ပြောင်းတိုက်မည်ဆိုလျှင် အဆီထုတ်ထားသော နွားနို့၊ပြုပြင်ထားသော နွားနို့ မဟုတ်ဘဲ နွားနို့အစစ်ကို သာအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ နွားနို့အစစ်ကို များသောအားဖြင့် ကလေးအသက် ၂ နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် တုိုက်ရန်ညွှန်ကြားသော်လည်း၊ အဆီ ၂ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သော နွားနို့ကို အသက် ၁၈လ အထက်တွင် သောက်နိုင်သည်ဟု အချို့ဆရာဝန်များက ခွင့်ပြုကြသည်။
အောက်ပါတို့သည် သင်စိုးရိမ်ပူပန်နေသော အကြောင်းအရာများဖြစ်နို်င်ပါသည်။
သင့်ကလေး၏ သွားများကို ဂရုစိုက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ သွားပျက်စီးပြီး ကျိုးလျှင် ပါးစပ်တွင်လည်း ပုံပျက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ကလေးသည် ကြီးသွားမလဲခင် ထိုသွားများဖြင့် အစားများကို ကိုက်ခြင်း၊ ၀ါးခြင်းကို နှစ်များစွာပြုလုပ်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။ သွားပျက်စီးလျှင် အစားအသောက်စားခြင်းလည်း ပျက်နိုင်သည်။ ကျန်းမာသောသွားများသည် စကားပြောတိုးတက်ခြင်းနှင့် သွားများ၏ ပုံစံအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ မကြာခင် သင့်ကလေး၏ သွားတိုက်သော အလေ့အထကို စတင်လေ့ကျင့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင့်ကလေး၏ သွားများကို ကျန်းမာစေရန် သွားကို ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်သော အလေ့အထသည် သင့်ကလေးအတွက် အခြေခံကောင်းဖြစ်ပါသည်။
ဂွမ်းစ၊ သန့်ရှင်းသော အ၀တ်စ၊ တစ်ခါသုံး လက်အိတ် တို့ကို သုံးနိုင်ပြီး မွေးကင်းစကလေးများအတွက် ထုတ်ထားသော သွားတိုက်တံများလည်း သုံးနိုင်ပါသည်။ သင့်ကလေး၏ သွားများကို အစာစားပြီးချိန်နှင့် ညအိမ်ရာမ၀င်ခင် သန့်ရှင်းပေးရပါမည်။ သွားတိုက်ပေးသည့်အခါ လျှာကိုပါ သန့်ရှင်းပေးရန်လိုပါသည်။ ကလေးအတွက် သွားတိုက်ဆေး မသုံးရပါ။ သို့သော် သင့်ကလေး နှစ်သက်လျှင် သွားတိုက်ဆေး အနည်းငယ် ထည့်ပေးနိုင်ပါသည်။
သွားကို ဂရုစိုက်ခြင်းအပြင်၊ ကောင်းမွန်သော အာဟာရသည်လည်း ကလေး၏ ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါသည်။ သင့်ကလေးသည် ကယ်လ်စီယမ်၊ ဖော့စဖိတ်၊ နှင့် အခြားဗီတာမင်နှင့် သတ္ထုဓာတ်များကို လုံလောက်စွာရရှိသင့်သည်။ ထိုဓာတ်များသည် သွားဖုံးသွေးယိုခြင်းနှင့် သွားပိုးစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော နာကျင်မှုကို သက်သာစေသည်။ ကျန်းမာသော ကလေးပင်ဖြစ်နေပါစေ အချိုစားခြင်းကို တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်သာ စားရန် ကန့်သတ်သင့်သည်။ အစားစားချိန် တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန် ကြားတွင် အချိုကျွေးခြင်းထက် အစာစားချိန်တွင်အချို ကျွေးခြင်းက ပိုကောင်းပါသည်။ အချိုစားပြီးလျှင် သင့်ကလေးကို သွားတိုက်ပေးပါ။
အချိန်မှန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းကို အသက် ၆လ လယ် နှင့် အသက် ၁၂ လတွင် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကလေးကို ထိခိုက်စေမည့် အပြုအမူများဖြစ်သော နို့ဘူးသောက်ရင်း အိပ်ရာဝင်ခြင်း၊ ကလေးသည် ညတွင် ကောင်းစွာအိပ်မပျော်ခြင်း၊ နေ့ဘက်တွင် အိပ်ခြင်း၊ သင့်ကလေးသည် နို့ဘူးကို အချိန်များများစို့ခြင်း များသည် ကလေးကို သွားပိုးစားသည့် ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများစေသည်။ သင့်ကလေး၏ သွားကို သွားရောဂါများမဖြစ်စေရန်စစ်ဆေးပေးပါ။ သင့်ကလေးတွင် သွားကျဲနေသည့် နေရာရှိပါက နောက်ပိုင်းတွင် နေရာမှန်သွားပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်နှင့် ပြသရန် များသောအားဖြင့် မလိုအပ်ပါ။
ထို့နောက် ၂၈ ပတ်တွင် ကလေးသည် မည်သို့ ဆက်လက်ကြီးထွားမည်နည်း။
Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများနှင့် ကုသမှုများကို မပြုလုပ်ပေးပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စကျတငျဘာ 4, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စကျတငျဘာ 4, 2017
Murkoff, Heidi. What to Expect, The First Year. New York: Workman Publishing Company, 2009. Print. Page 345-369.